Ingingqi: Yakha idathabheyisi yeDesktop ukuphuhlisa kunye nokuvumelanisa indawo yakho yeWordPress | Martech Zone
Ingingqi: Yakha idathabheyisi yeDesktop ukuphuhlisa kunye nokuvumelanisa indawo yakho yeWordPress
NgoMvulo, Septemba 28, 2020 NgoMvulo, Septemba 28, 2020 Douglas Karr
Ukuba wenze okuninzi kuphuhliso lweWordPress, uyazi ukuba kuhlala kuguquguquka kwaye kuyakhawuleza ukusebenza kwidesktop yakho okanye kwilaptop kunokuba uhlala ukhathazekile ngokudibanisa ukude. Ukuqhuba isiseko sedatha yendawo kunokuba yintlungu, nangona… njengokumisela MAMP or XAMPP ukuqala iseva yewebhu yendawo, yenza ulwimi lwakho lwenkqubo, emva koko uqhagamshele kwindawo yogcino lwedatha.
I-WordPress ilula ngokulula ngokwembono yoyilo… isebenzisa i-PHP kunye ne-MySQL kwi-NGINX okanye kwi-Apache Server. Ke, ukuphosa uyilo lwewebhu yonke kwiLaptop yakho kunokuba yitoni ngaphezulu….
Indawo: Unqakrazo olunye lokuFakelwa kweWindowsPress
Ingingqi yenza indawo yeWordPress yendawo yonke umoya opholileyo, ngenxa yoko akuyomfuneko ukuba uzihluphe ngokuyimisa ngokwakho. Unqakrazo olunye kunye nendawo yakho ekulungeleyo ukuya kuyo-i-SSL ifakiwe! Uluhlu lweempawu luyamangalisa!
IiNkonzo zeSayithi -Native, inqanaba le-OS le-PHP, i-MYSQL, iinkonzo zeseva yewebhu. Qwalasela iifayile kuhlobo ngalunye lwe-PHP, i-NGINX, i-Apache, kunye ne-MySQL zonke zibonakalisiwe ukuze zihlelwe.
Ulawulo lweSiza -Utshintsho olushushu phakathi kwe-NGINX okanye i-Apache, iinguqulelo ze-PHP (5.6, 7.3 kunye no-7.4 ngeOpcache), kunye ne-URL yeSiza. Iifayile zokungena kwiinguqulelo ezithile ze-PHP, i-NGINX, i-Apache, kunye ne-MySQL zonke zichazwe ngokulula.
Iindawo zeClone -Zonke iifayile, ugcino lwedatha, ukumiliselwa, kubandakanya i-URL yeSiza inokutshintshwa ngokukhuselekileyo kwaye yenziwe iklanywe.
Ukuguqulwa -Khawuleza ulungise iphutha le-PHP (i-Xdebug iyafumaneka kwi Izongezo kwiThala leencwadi)
Itonela yeHTTPS Izatifikethi ezityikityiweyo zenzelwa ngokuzenzekelayo kwiindawo ezintsha. Iitonela zesiseko esibonelelwa yiNgrok, ii-URL ezingapheliyo ezinemida yoqhagamshelo oluphezulu, imigca yovavanyo yewebhu, ipayPal IPN, kunye neeAPI zokuphumla
I-Multisite ye-WordPress -Inkxaso yommandla ongezantsi kunye nofakelo lweenkcukacha ezingasasebenziyo ngonqakrazo olunye ukuvumelanisa isizinda kwifayile yenginginya.
Iimpawu zeSiza - gcina nasiphi na isiza njengeplani oza kuyisebenzisa kwakhona kamva. Zonke iifayile, iziseko sedatha, iifayile zoqwalaselo, kunye noseto lwasekhaya ziya kubuyiselwa.
Ngenisa / Thumela ngaphandle -Ibandakanya iifayile zesiza, oovimba beenkcukacha, iifayile zoqwalaselo, iifayile zelog, kunye noseto lwasekhaya. Ungazifaki iifayile kwizinto ezithunyelwa ngaphandle ezinje ngoovimba abagcina izinto zakudala, iiPSDs, .git, njl.
iposi -I-MailHog ibandakanyiwe ukukhawulela nayiphi na i-imeyile ephumayo evela kwi-imeyile ye-PHP yokujonga kunye nokulungisa ingxaki (oku kuthetha ukuba unokuvavanya ii-imeyile ngelixa ungaxhunyiwe kwi-intanethi).
I-SSH + WP-CLI -Iingcambu ezilula zokufikelela kwe-SSH kwiindawo ezithile. I-WP-CLI ibonelelwe, chwetheza nje “wp” emva kokuvula indawo ye-SSH.
inkxaso -Ibandakanya iiForam zoLuntu, inkxaso ye-in-app, kunye netikiti.
Vumelanisa kwaye uhambise kwindawo yaseKhaya ukuya kwiFlywheel okanye kwi-WPEngine
Ngcono nangakumbi, imeko yakho yasekhaya inokusasazwa kwaye ivumelaniswe kwizinto ezithile ezintle I-WordPress ilawulwa ngokusingathwa iinkonzo:
Sebenzisa iWindowsPress - ukuya Flywheel mveliso, Flywheel ukwenza isiteji, okanye ukuya Injini yeWP
IMicrosoftSync -Iifayile eziguqukileyo kuphela ziya kuboniswa xa zihamba phakathi kweendawo.
Indawo yalapha ikhutshwe ngu Flywheel!
Ukubhengezwa: Siyinxalenye ye Flywheel (Indawo yethu ibanjwe apha!) Kwaye Injini yeWP.
tags: apacheqwa laselaukulungisa igama lokushicilelaThumela i-wordpressiimpukaneuphuhliso lwasekhayalog iifayileumncediphpsebenzisa i-wordpress yendawothumela imeyilevumelanisa i-wordpressisinxibelelanisi segamaWordPressIiplinta zegamayokupasa amagamawp-ehlwpengine
PartnerStack: Lawula amahlakani akho, abaThengisi kwakhona, kunye namaQabane